Mpanamboatra sy mpamatsy vokatra farany - China Factory Factory vokatra farany
Kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny landihazo kofehy vita tamin'ny kofehy vita amin'ny kofehy 981457A
Paramèteram-bokatra 24 kofehy amboradara boribory volon'ondry manga. Enina Strand Embroidery Floss dia kofehy vita amin'ny polyester ary landihazo vita amin'ny kofehy landihazo lava faran'izay tsara. Izy io dia indroa natokana ho an'ny famirapiratana an-tsokosoko, miampy ny lokony ary mahatohitra azy. Ny floss stitch hazo fijaliana dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana fehin-tànana fisakaizana, Stitch Cross, peta-kofehy, asa tanana ho an'ny ankizy, zaitra, tenona, DIY, Crochet sns. Mety amin'ny ankizy, namana, reny, renibe, ...
8 metatra 6 kofehy polyester landihazo kofehy kofehy polyester landihazo kofehy kofehy Thread6310007
Parameteran'ny vokatra 100 pcs / 50pcs napetraka isan-karazany vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny DIY. Enina Strand Embroidery Floss dia kofehy vita amin'ny polyester ary landihazo vita amin'ny kofehy landihazo lava faran'izay tsara. Izy io dia indroa natokana ho an'ny famirapiratana an-tsokosoko, miampy ny lokony ary mahatohitra azy. Ny felam-boninkazo stitch dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana fehin-tànana fisakaizana, Stitch Cross, peta-kofehy, asa tanana ho an'ny ankizy, zaitra, fanenomana, DIY, Crochet ...
.Wh Wholesale Eco Friendly tanana vita amin'ny landihazo landihazo amam-boasary kofehy kofehy kofehy kofehy fanjairana kofehy6310009
Parameteran'ny vokatra 80 kofehy amboradara kofehy peta-kofehy miaraka amina kitapo fanaovana peta-kofehy ho an'ny mpikarakara. Ny kofehy peta-kofehy ambony kalitao miloko marevaka, stereoscopic, tanjaka avo, fanoherana, aza miala, aza vaky mora frizzy. Ny kalitao avo lenta sy maharitra, ny kofehy fanaovana amboradara dia vita amin'ny polyester malefaka, malefaka ary landy. Mora ampiasaina, ny felany tsirairay dia 8m ny halavany ary ny felam-boninkazo amboradara tsirairay dia tonga amin'ny tadiny enina. Ny stitch stitch floss dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana brasele finamanana ...
100 miloko DIY miloko landihazo kofehy peta-kofehy kofehy kofehy taratasy mivalona Manual DIY loko kofehy kofehy6310006
100 loko DIY kofehy landihazo kofehy amboradara kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny loko DIY. Ny kofehy peta-kofehy ambony kalitao miloko marevaka, stereoscopic, tanjaka avo, fanoherana, aza miala, aza vaky mora frizzy. Ny kalitao avo lenta sy maharitra, ny kofehy fanaovana amboradara dia vita amin'ny polyester malefaka, malefaka ary landy. Mora ampiasaina, ny felany tsirairay dia 8m ny halavany ary ny felam-boninkazo amboradara tsirairay dia tonga amin'ny tadiny enina. Ny felam-boninkazo lakroa dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana fehin-tànana fisakaizana, Stitch Cross, peta-kofehy, asa tanana ho an'ny ankizy, zaitra, fanenomana, DIY, Crochet sns. Mety ho an'ny ankizy, namana, reny, renibe, mpiara-miasa, mpifanolo-bodirindrina na mpiorina stitch na sitraka.
50 / 100skeins an'ny kofehy misy loko maro ho an'ny peta-kofehy peta-kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy fanjairana kofehy fanjairana 6310001
50/100 Colony ambongadiny vita amin'ny landihazo vita amin'ny tànana vita amin'ny tanana
tenona kofehy peta-kofehy vita amin'ny kofehy.
Kofehy amboradara avo lenta loko mamirapiratra, stereoskopika, tanjaka avo,
mitafy fanoherana, aza malazo, aza frizzy mora vaky. Kalitao avo lenta sy mateza ，
ny kofehy fanaovana amboradara dia vita amin'ny polyester malefaka, malefaka ary landy. Mora ampiasaina,
Ny felam-boninkazo tsirairay dia 8m ny halavany ary ny felam-boninkazo amboradara tsirairay dia tonga amin'ny tadiny enina.
Ny floss stitch cross dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana fehin-tànana fisakaizana, Cross Stitch,
Ny peta-kofehy, ny asa-tanan'ny ankizy, ny zaitra, ny tenona, ny DIY, ny Crochet sns. Mety amin'ny
ankizy, namana, reny, renibe, mpiara-miasa, mpifanila vodirindrina na mpiorina stitch na sitraka.